ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ မိုင်းများကို ရှင်းလင်းရန် ယူရို ၁၀ သန်း ဂျာမနီသုံးစွဲမည် - Yangon Media Group
ဘာလင် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ရက်ကွာမြို့မှ မိုင်းများကို ဖယ်ရှားရာတွင် ကူညီရန် ကနဦး ယူရို ၁၀ သန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သောကြာနေ့ထုတ် Handelsblatt သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရန်ပုံငွေ တိုးမြှင့်ရန် ကိစ္စကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနက သောကြာနေ့တွင် ကြေညာရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းစာကဆိုသည်။
ယင်းသဘောတူညီချက်အရ ရက်ကွာမြို့မှ မိုင်းများကို ရှင်းလင်းရန် အမေရိကန်အစိုးရကန်ထရိုက်တာတစ်ခုဖြစ်သည့် Tetra Tech အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံက ရန်ပုံငွေကို ကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်စစ်တပ်က ဆီးရီးယားရှိ ထပ်ဆောင်း အကူအညီများအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံကို ဆက်လက်ဖိအားပေးပြောဆိုလျက်ရှိသော်လည်း ဂျာမနီနိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဆောင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကိုသာ စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း သိရသည်။
ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂျလာမာကယ်၏ ကွန်ဆားဗေးတစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင် နော်ဘတ် ရတ်တန်က ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ငွေကြေးအကူအညီမှာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့်အဖြေတစ်ခုတို့ ပေါင်းစပ်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ၏ အဆိုအရ ရာကွာမြို့မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် ဂျာမနီနို်င်ငံ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသည် အခြေအနေတည်ငြိမ်လာပါက စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အေဆမ် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပ
ဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ပျောက်ဆုံးနေသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေရာတွင် ကူညီရန် ဥပဒေ?
အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေတွင် ထောင်ပြစ်ဒဏ်မထည့်သွင်းသင့်ဟု ပြည်ထေ??